ကုန်ကြမ်း Cetilistat (Oblean) အမှုန့် (282526-98-1) hplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့် / Cetilistat (Oblean) အမှုန့်
rating: SKU: 282526-98-1. အမျိုးအစား: အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Cetilistat ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (Oblean) အမှုန့် (282526-98-1) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Cetilistat (Oblean) အမှုန့်ကိုအခြေခံဇာတ်ကောင်
Cetilistat (Oblean) အမှုန့်သံသရာ
ဓာတုအမည်များ: Cetilistat အမှုန့်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်များ: Oblean အမှုန့်
Cetilistat (Oblean) အမှုန့်သုံးစွဲမှု
Cetilistat (Oblean) အမှုန့်ပန်ကရိယ lipase တစ်ခု inhibitor, အူထဲမှာ triglyceride ဆင်းချိုးထားတဲ့အင်ဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအင်ဇိုင်းမရှိရင်အစားအသောက်များတွင်ထံမှ triglyceride ကိုစုပ်ယူအခမဲ့ဖက်တီးအက်ဆစ်သို့ hydrolyzed ခံရခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ကြသည်နှင့် undigested ပြန်ထွက်သွားသည်ခံရဖို့ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေး, လက်ရှိ FDA က-approved မူးယစ်ဆေး orlistat အမှုန့်နှင့်ဆင်တူနေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောမော်လီကျူးတည်ဆောက်ပုံကြောင့်ပိုပြီးခံသာဘေးထွက်သက်ရောက်မှုပရိုဖိုင်းရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကအဆင့်2ရုံးတင်စစ်ဆေးနေတဲ့ 612-ရက်သတ္တပတ်ကုသမှုကာလအတွင်းကီလိုဂရမ် / m28 45 မှ2တစ် BMI နှင့်အတူ 12 အဝလွန်, ဆီးချိုဘာသာရပ်များလေ့လာခဲ့သည်။ Cetilistat အမှုန့် 80 နှင့် 120 မီလီဂရမ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ (3.85 ကီလိုဂရမ်နှင့် 4.32 ကီလိုဂရမ် vs. 2.86 ကီလိုဂရမ်အသီးသီး) နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သိသိသာသာကိုယ်အလေးချိန်ရာထူးတိုး။ Oblean အမှုန့်-သွေးဆောင်ကိုယ်အလေးချိန် orlistat အမှုန့် (3.78 ကီလိုဂရမ်) နှင့်အတူအောင်မြင်အလေးချိန်အရှုံးဆင်တူခဲ့သည်။ Cetilistat အမှုန့်ကိုကောင်းစွာသည်းခံနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များနှင့် orlistat အမှုန့်အုပ်စုများကြောင့်နည်းပါးလာမှရပ်စဲပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ orlistat အမှုန့်အုပ်စုတွင်ပြတ်တောက်သည့် 120 ထက်သိသိသာသာဆိုးရွားခဲ့ကြောင်းပေးထား Oblean အမှုန့်နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုများ mg နှင့် Cetilistat အမှုန့်အလေးချိန်အရှုံးရရှိများအတွက်ဦးစားပေး lipase inhibitor ဖြစ်လာစေခြင်းငှါ, အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များမှလုံးဝကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Oblean အမှုန့်များ၏အဆင့်3စမ်းသပ်မှုတွေဂျပန်တွင်တိုးတက်မှုအတွက်လက်ရှိဖြစ်ကြသည်။
Oblean အမှုန့်သောက်သုံးသောနှုတ်အုပ်ချုပ်မှုများအတွက် 60mg ခှနျအားဗလတောင်အဖြစ်ပေးအပ်သည်။ အဆိုပါဆေးဝါးအစားအသောက်များတွင်ကနေအဆီစုပ်ယူမှုကိုထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်ဒါအစားအစာ, ကြေညက်နေစဉ်ကအလုပ်လုပ်နိုင်စေရန်အစားအစာများနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားသည်။ လိုအပ်သောနေ့စဉ်သောက်သုံးသော wellas အဖြစ်သင့်ဆရာဝန်တစ်ဦးချင်းစီထိုးနှင့်အတူယူမည်မျှဆေးဝါးပေါ်တွင်သင်အကြံပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင်တို့သည်ဤညွှန်ကြားချက်လိုက်နာအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သင့်ရဲ့ဆရာဝန်ယူသင့်ကိုပြောပြမှာထက်ပိုမယူပါနှင့်။
ဘယ်လို Cetilistat အမှုန့်အကျင့်ကိုကျင့်
Cetilistat အမှုန့်တစ်နိမ့်ကယ်လိုရီအစားအစာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်အသုံးပြုတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်အမှုန့်သည်။ ဒါဟာကိုယ်တည်းထဲသို့ကြေညက်ခြင်းနှင့်စုပ်ယူခံရခြင်းမှအဆီတစ်သိသိသာသာငွေပမာဏကိုပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ဒါကကိုယ်အလေးချိန်အမှုန့်တစ် lipase inhibitor အဖြစ်ခွဲခြားကဘယ်မှာကလုပ်ကွက် lipase လို့ခေါ်တဲ့ lipolytic အင်ဇိုင်း၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစာခြေစနစ်အပေါ်တိုက်ရိုက်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား lipases ခန္ဓာကိုယ်ကဒီဆေးဝါးတစ်မုန့်ညက်နှင့်အတူအုပ်ချုပ်သောအခါကအားဖြင့်ဆီဥကိုဖြိုမှသူတို့ကိုဟန့်တားခြင်း, lipases မှချည်နှောင်ခြင်း, fat.However တွေဟာအစာကြေဖို့ကိုအသုံးပြုသည်ဘာတွေလုပ်နေလဲ။ hydrolyzed ကြသည်မဟုတ်ထားတဲ့အဆီအစားတိုးမြှင့် fecal အဆီမစင်နဲ့လျော့ချအဆီစုပ်ယူမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့သည်မစင်ထဲမှာပြန်ထွက်သွားသည်နေကြသည်။ တစ်ဦးလျှော့ကယ်လိုရီအစားအစာတွေနဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါကကိုယ်အလေးချိန်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့်လွယ်ကူအဝလွန်လူနာပုံသဏ္ဍာန်ပြန်ရရှိရန်အဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ, အားဖြင့်အောင်မြင်သောကိုယ်အလေးချိန်၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ကူညီနိုင်သည်။ ၎င်း၏ အသုံးပြု. လမ်းပန်ကရိယ lipase ဟန့်တားသဖြင့်အဟောင်းများကို orlistat အမှုန့်အဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာ3နာရီအတွင်း 24 တောင့ထက်ပိုယူရန်အကြံပြုသည်မဟုတ်။
သင်တစ်ဦးမတည့်တုံ့ပြန်မှုကိုခံရလျှင်ထိုခဏခြင်းတွင်သင့်ရဲ့အနီးဆုံးအရေးပေါ်ဌာနကိုဆက်လက်။ များသောအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုနဲ့ဆက်စပ်ရောဂါလက္ခဏာများအခက်အခဲအသက်ရှူခြင်းသို့မဟုတ်မျို, ရင်ဘတ်တင်းကျပ်, ရောင်ရမ်းခြင်း, အရေပြားအဖုများနှင့်အသင်းအဖွဲ့ချုပ်ပါဝင်သည်။
Cetislim အမြဲလူနာအားလုံးသင့်လျော်ဘူး။ အမြဲတမ်းသင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်လျှင်မည်သည့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်သုံးပြီးအခြားမည်သည့်ဆေး (ဆေးညွှန်းသို့မဟုတ် Non-ဆေးညွှန်း) ကို အသုံးပြု. ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေ, နို့တိုက်ကြိုတင်ဒီဆေးကိုသုံးပြီးမှသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတိုင်ပင်ဆွေးနွေး, သို့မဟုတ်သင်မဆိုဓာတ်မတည်သို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးရှိပါက ပြဿနာများကို။
Oblean အမှုန့်နှင့်ဆေးညွှန်းများ၏မှန်ကန်သောသောက်သုံးသောလေ့လူနာနှင့်ကုသခံနေရအခြေအနေကိုပေါ်မူတည်သည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသင်၏သောက်သုံးသောညှိမထားပါနဲ့။ သတ်မှတ်ထားသောနှင့်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဒီထုတ်ကုန်များကိုသာအသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။
Cetilistat ကုန်ကြမ်း Powder
Cetilistat (Oblean) အမှုန့်စျေးကွက်
Cetilistat (Oblean) အမှုန့်မဆိုဘေးထွက်သက်ရောက်မှုရှိပါသလား
Cetislim အမှုန့်နှင့်အတူအဝလွန်များအတွက်ကုသမှုခံယူလူနာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေဖြင့်အထိနာနိုင်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ပျက်လျှင်သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်အကြောင်းကြားရမည်။ တချို့ကဥပမာကိုဤနေရာတွင်ပေးထားကြသည်:
Oblean အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါဘယ်လို: AASraw ထံမှ Cetilistat အမှုန့်ကိုဝယ်